3 ply isiri-yakarukwa inoraswa firita inodzivirira kumeso mask kubva kuchina
Tsananguro: Isina-rakarukwa machira mamask anogadzirwa nekupisa kudzvanya; inoumbwa neRisina-rakarukwa jira uye yakanyungudika-yakapepetwa firita, mhino mutsetse, uye muromo-chidimbu tepi.
Chinyorwa: Isiri-yakarukwa jira uye yakanyungudika-yakapepetwa firita
Type: 3 ply kuraswa kurapa mask
Yakajairwa: Iyo bhakitiriya filtration inoshanda yeiyo mask haifanire kunge iri pasi pe 95%. (Zvakafanana nehutachiona hwekuchenesa mafirita mu "YY 0469-2011 Medical Medical Mask")
Tinogona kutsigira mudura rakagadzirira kutumira, kuraswa kwekurapa kwekuvhiya mask, hutachiona filtration mhedzisiro inogona kuva> 95%.
Yakazara Glue / Super SBS Zvese-chinangwa General Adhesive Glue
1.Midziyo: yakadhindwa kubva kune akasiyana emhando yepamusoro resini
2. Chitarisiko: chiedza yeyero mvura.
3. Inokodzera ruoko smear, yakasimba kunamira, yakatsiga hunhu.
4. Kushanda: zvinowanzoshandiswa musimbi nemachira, mapurasitiki uye mapurasitiki, girazi nesimbi, ese marudzi erabha, pepa repurasitiki, huni, dehwe, plush, Yew, yakaoma PVC nesimbi, nezvimwe. polyethylene uye polypropylene.
diy epoxy resin yeunyanzvi yakajeka resin epoxy yeiyo DIY yekushongedza zvishongo zvisiri zvine chepfu epoxy resin
1.vhura chiyero, pfeka mukapu yekuyera uye ibvise
2. Isa guruu Chokutanga, wozonama B, chikamu chacho ndi1: 25: 1
3. Mutsa zvakaenzana kusvikira yajeka uye yunifomu isina dhizaini
4.Glue yakasanganiswa ichiri kwemaminetsi mashoma. Kana iyo bubble yanyangarika idira iyo muchigayo chishandiso
5.Shandisa mushonga wemazino kunamatira kanhu kadiki paglue rinodonhedza muforoma, uye fambisa kureva zvishoma kune chaunoda inki
6.Kana kudira iyo toner poeder mune yakagadzirirwa gutta percha, fambisa zvakaenzana uye wozodururira muforoma
7.Iyo inogona kudonhedzwa mushure mekunamatira kwakanyatso simbiswa, kazhinji zvinotora 24h mukamuri tembiricha
8.After demoulding, Polish zvishoma, rapera chigadzirwa achava runako
Pepa repurasitiki gundi color kudhinda rakaminama katoni manyore kusimbisa glue handbag kubatanidza lap kuvhara chisimbiso kumucheto glue
1.Usasanganise ichi chigadzirwa nezvimwe zvinonamira, zvikasadaro iyo glue inodzikira uye haigone kushandiswa
2. Mushure mekutora glue, chisimbise munguva yekudzivirira kuomesa mweya uye ganda. Iyo glue inotora chishandiso inofanirwa kuve yakachena kudzivirira kuti uunze kusvibiswa muhunhu
3.OPP, BOPP zvinhu yakasimba inert zvinhu, zvakaoma kusunga, saka kubatana kwacho kunofanira kushandiswa zvinoenderana nenzira, zvikasadaro zviri nyore kukonzera kuputika kunoshamisa
4.Kunyangwe iyo yekubatana mhedzisiro yakakwana, ndapota tarisa kunamatira mushure maawa masere
5. Ruvara uye viscosity yechigadzirwa ichi chinoshanduka nekuchinja kwekuchengetedza nguva uye tembiricha. Iyo inzvimbo yepamoyo yeglue, asi haina kukanganisa kubatana kweglue
6. Mushure mekushandisa, inofanirwa kuvharwa uye kuchengetwa mumumvuri wakaoma
A + mhando yakakwira yakasimba chena glue isina waya inosunga bhuku invoice glue solidification iripachena kugadzirisa gundi bhuku glue 680ml
1.Glue uye kuwanda kwemvura kwakasiyana, 1 litre haina kuenzana ne1 kg, ndapota ona usati watenga
2.Glue tembiricha yekuchengetera pazasi zero ichachinja mashandisiro, usati watenga kuti usimbise tembiricha yemuno
Super gobvu polyvinyl doro bepa guruu inoonekera yakajeka gobvu gorosi makatoni isina waya anosunga glue 500ml
1.Strong inonamira simba: yakasimba yekutanga yekunamatira simba, yakajeka mushure mekusimbiswa
2.Easy kushandisa: mushure mekukurudzira zvakaenzana, bhuroka wakananga pane inonamira zvinhu
3.Water soluble: soluble mumvura, nyore kuchenesa
4.Paper shandisa: hapana pamusoro kurapwa kweyakajairika mapepa kubatanidza
Nyowani Mufashoni Dustproof Dziviriro Goggles Ziso RinodziviriraGirazi
Zvinhu zvenaironi furemu, nyoro uye kusanduka.
PC lens, ruvara runogona kuchinjwa seyako requst.
Anogadziridzwa matanda emabhureki anogona kuwedzera tambo kuti zvive nyore kutora.
Kupfeka kunowanikwa kune anti-scratch, anti-fog basa
China kumeso kumeso vatengesi vanoraswa 3 ply guruva kumeso mask kune munhu mukuru
* Disposable Face Mask Kubatsira: 3 masara ekusefa, hapana hwema, anti-alejiki zvinhu, yekuchenesa kurongedza, yakanaka kufema.
* Utsanana chifukidzo zvinobudirira kudzivirira inhalation yeguruva, mukume, bvudzi, furuwenza, hutachiona, nezvimwewo .. Inokodzera kuchenesa kwemazuva ese, allergic
vanhu, vashandi vebasa (zvekurapa, mazino, zvekuyamwisa, zvekudya, kiriniki, runako, mbambo, chipfuwo, nezvimwewo), pamwe nevarwere vanoda
Wholesale Bhuruu Poda Yemahara Isiri-Yekurapa Nitrile Gloves Nepamusoro Yemhando Inoraswa NItrile magurovhosi
Nitrile upfu-isina magurovhosi anoraswa akagadzirwa kubva kune yemhando synthetic rabha kemikari inopa yakakwira puncture kuramba kupfuura chero girovhosi zvinhu. Nitrile magiravhusi ane ari nani kemikari kuramba kupfuura Latex kana Vinyl magiravhusi.
Nitrile upfu-isina magurovhosi anoshandiswa panguva dzekuongororwa kwechiremba. Vanopa kuchengetedzwa kwemvura panguva dzekuita uye zviitiko zvekuchengeta varwere, zvichibatsira kudzivirira kusvibiswa sevashandi vezvehutano vanogona kuburitswa nenjodzi dzehupenyu dzinowanzo kutakurwa neropa remunhu, mvura yemumuviri, zvinyama, utachiona hunotakurwa neropa uye mienzaniso. Uyezve, magurovhosi edu eNitrile asina hupfu anobatsira kupa chengetedzo kubva padiki diki yekushandisa kwemakemikari uye kudiki kwekuputika.
Nitrile upfu-isina magurovhosi anogadzirwa nechengetedzo yepamusoro yezvipingamupinyi zvinoenderana nemirau inotevera yeDFA yehutano uye maindasitiri ekudya.
latex exmination glove Wholesale zvakachipa mitengo yepamusoro yekurapa latex yekuongorora magiravhusi
anodzivirira magurovhosi anogadzirwa nemhando yezvinhu zvekushandira huwandu hwakawanda hwemaindasitiri senge hutano, mazino, rabhoritari, maindasitiri, makiriniki ezvipfuyo, matembera maparaini, kugadzira chikafu uye chikafu chekudya.
Bvunzo magurovhosi ndiwo akajairwa pese panenge paine maitiro panodiwa utsanana. Ongororo magiravhosi anoshandiswa kubatsira kudzivirira kupararira kwehutachiona pamwe nekubatsira kupa kudzivirira kubva pakusangana-nekusangana sezvo vashandi vanogona kuburitswa nenjodzi dzehupenyu kuburikidza nemvura yemumuviri, ropa uye utachiona hutakurwa neropa.
Ndokumbirawo muyeuke kuti rimwe girovhosi mhando rinogona kusashandira zvakanaka kune ese mabasa. General chinangwa Vinyl uye Poly magiravhusi akakosha kumabasa mukubata chikafu uye kuchengetedza imba. Nitrile uye Latex zvekurapa mabvunzo magurovhosi anodiwa panguva yekuita uye yekurapa zviitiko zvekuchengetedza.
Isina kuchena yakajeka
UV kuramba asidi uye alkali